Wafdi ka socda DF Soomaaliya oo gaaray magaalada Beledweyne | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Wafdi ka socda DF Soomaaliya oo gaaray magaalada Beledweyne
Wafdi ka socda DF Soomaaliya oo gaaray magaalada Beledweyne
Waxaa maaanta Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan gaaray Wafdi uu hoggaaminayo siihaayaha xilka Wasiir ku xigeenka Wasaarada duulista iyo hawada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, iyada oo halkaasi lagu soo dhaweeyay.
Wafdiga ayaa waxaa kormeer indha-indheyn ah ku sameeyeen garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee Magaalada Beledweyne oo ay ka socdeen Shaqooyin kala duwan maadaama duulimaadyada Gudaha Soomaaliya la furay.
Sidoo kale Wafdiga ayaa waxaa qeyb ka ah Maareeyaha Hay’adda Duulista Raydika Axmed Macalin Xasan, Wasiir ku xigeenka Duulista iyo Hawada HirSshabeelle iyo mas’uuliyiin kale.
Socdalka Wafdiga socda Dowladda Soomaaliya ee Beledweyne ayaa lagu sheegay in uu ku saabsan yahay habeeynta iyo dhismaha Garoonka Ugaas Khaalif iyada oo Garoonka loo tababari doono Shaqaale Xirfadeysan oo ka shaqeyn doono Garoonka.
Maqaal horeHowl-gallo dad badan lagu soo qab-qabtay oo laga sameeyey Kismaayo
Maqaal XigaQatar Airways oo dib u bilaabeyso duulimaadyadeeda Soomaaliya